Horudhac: Atletico Madrid vs Barcelona… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka weyn ee caawa ka dhacaya Wanda Metropolitano) – Gool FM
Horudhac: Atletico Madrid vs Barcelona… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka weyn ee caawa ka dhacaya Wanda Metropolitano)
(Madrid) 21 Nof 2020. Mid ka mid ah kulammada ugu xiisaha badan horyaalka La Liga ayaa caawa ka dhacaya garoonka Wanda Metropolitano, iyadoo Atletico Madrid ay soo dhoweynayso kooxda Barcelona.
Atletico Madrid ayaa haatan fadhisa kaalinta saddexaad ee kala sarreynta horyaalka La Liga kaddib bandhig cajiib ah oo ay ku bilowdeen kal ciyaareedkan, laakiin Barcelona ayaa fadhisa kaalinta siddeedaad, kaddib markii ay uruursadeen 11-dhibcood todobadoodii kulan ee furitaanka horyaalka oo ay ciyaareen fasal ciyaareedkan 2020-21.
Lucas Torreira iyo Luis Suarez ayaa labaduba seegi doona kulanka caawa ay kooxdooda Atletico Madrid qaabileyso Barca kaddib markii laga helay Korona Fayras, xiddiga reer Uruguay ayaana nasiib u yeelan waayey inuu wajaho kooxdiisii hore.
Mario Hermoso ayaa laga yaabaa inuu ka soo muuqdo daafaca bidix ee kooxda martida loo yahay si uu u siiyo xasillooni difaac oo ka badan tan Renan Lodi.
Geoffrey Kondogbia ayaa la filayaa inuu ku soo bilowdo khadka dhexe kaddib markii uu dhawaan kaga soo dhaqaaqay Valencia.
Ansu Fati ayaa qarka u saaran inuu garoomada ka maqnaado tan iyo bisha Maarso sababo la xiriira dhaawac muruqa ah, sidaasi darteed Pedri ayaa ku soo bilaaban doona garabka bidix ee weerarka Barcelona kulankan.
Philippe Coutinho ayaa la xaqiijiyay inuu taam yahay todobaadkankaddib dhibaato muruqa ah, laakiin waxaa laga yaabaa inuu kursiga keydka ku soo bilowdo.
Miralem Pjanic ayaa la filayaa inuu ka garab ciyaaro Frenkie De Jong oo saldhig u ah khadka dhexe ee Barca, iyadoo Sergio Busquets uu ku maqnaan doono dhaawac jilibka ah.
>- Kooxda Atletico Madrid ayaan la garaacin 23-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Atletico Madrid ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay shan ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay dheeshay horyaalka La Liga.
>- Kooxda Atletico ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool afarteedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Barcelona ayaa guuldarro la’aan ah 10 ka mid ah 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Atletico Madrid tartammada oo dhan.
Horudhac: Manchester United vs West Bromwich Albion… (Kooxda Ole oo raadinaysa inay guushii ugu horreysay ee Premier League ku gaarto garoonkeeda Old Trafford)